China USB mkpuchi ọkụ retardant mkpuchi ụlọ ọrụ na-emepụta | Weicheng
Liu GezhuangTwon, Liu Cai Jian obodo, Dacheng County, Langfang City, Hebei Provinc china
Ngwaahịa nchekwa ọkụ
Ime ụlọ intomscent fireproof mkpuchi maka nchara Ọdịdị
N'èzí intomscent fireproof mkpuchi maka nchara Ọdịdị
Non expansive ọkụ retardant mkpuchi maka n'èzí ígwè Ọdịdị
Ngwongwo na-ekpuchi ọkụ na-enweghị atụ maka mgbidi ụlọ
Igwe mkpuchi ọkụ ọkụ
Mgbawa ihe akaebe mastic
Ihe mgbochi ọkụ
Akpa ọkụ ọkụ
Fire retardant teepu
Mgbanwe organic ịkwụnye ihe
Inorganic fireproof ịkwụnye ihe onwunwe
Fire retardant ákwà
Silicone akwa ọkụ
Anwụrụ ọkụ ákwà mgbochi mgbidi ákwà
Anwụrụ ọkụ na-ekpuchi ọkụ
Na-agbanwe fireproof mkpuchi
CDDT-AA ụdị eriri ọkụ na-ekpuchi ọkụ bụ ụdị mkpuchi ọkụ ọkụ ọhụrụ nke ụlọ ọrụ anyị mepụtara dịka ụkpụrụ nke GA181-1998 Ministry of public Security. Ihe mejuputara ahia a bu ihe di iche iche nke oku na-achapu oku, ihe ndi ozo na ndi ozo. Ọ bụ elu mmiri na ọkụ eletrik na country.This ngwaahịa nwere ike na-emepụta edo na oké ogbo ụfụfụ mkpuchi mgbe ọ na-ewe iwe dị ọkụ. O nwere ike igbochi ya na igbochi mgbasa na mgbasa nke ire ọkụ, ma chebe wires na eriri. Isi uru ya bụ: nchedo gburugburu ebe obibi, enweghị mmetọ, na-adịghị egbu egbu ma na-atọ ụtọ, enweghị egwu na ahụike nke ndị ọrụ mkpuchi. Ngwaahịa a nwekwara njirimara nke mkpuchi dị nro, nrapado siri ike, mgbanwe dị mma, yana mkpuchi dị mma na mgbochi mmebi ahụ.
Aha ngwaahịa Eriri fireproof mkpuchi
Nkọwapụta Model 25kg / gbọmgbọm
Akụkụ nke Ngwa Ọ na ọtụtụ-eji maka ire ọkụ retardant ọgwụgwọ ofwires na Gịnị na-ike osisi, ulo oru na
Ngwuputa, nkwukọrịta na ụlọ obodo;
enwere ike iji ya maka nchekwa ọkụ nke osisi
ihe owuwu, ihe owuwu ígwè, na ihe na-ere ọkụ
substrates na n'okpuruala engineering.
Uru Uru 1. Mkpa ihe nkiri na ezigbo ọkụ ọkụ2. Easy ewu, brushing, spraying, wdg
3. Ezigbo nguzogide oku na mmiri iguzogide
4. A edo na oké ogbo ụfụfụ oyi akwa a kpụrụ mgbe ọkụ,
nke nwere mmetụta dị ọkụ na mmetụta mkpuchi mkpuchi ọkụ
CDDT-AA ụdị eriri ọkụ na-ekpuchi ọkụ bụ ụdị mkpuchi mkpuchi ọkụ ọhụrụ nke ụlọ ọrụ anyị mepụtara dịka ụkpụrụ GA181-1998 Ministry of public Security. Ihe mejuputara ahia a bu ihe di iche iche nke oku na-achapu oku, ihe ndi ozo na ndi ozo. Ọ bụ eriri mmiri na ọkụ eletrik dị elu na mba ahụ.
A na-eji ngwaahịa a eme ihe maka ọgwụgwọ ọkụ nke wires na eriri na osisi ike, mines, telekomunikashions na ụlọ obodo. A nwekwara ike iji ya maka nchekwa ọkụ nke ihe ọkụkụ na-ere ọkụ nke osisi, ụlọ ihe owuwu igwe na injinia n'okpuru ala.
Tupu iwube ihe mkpuchi ọkụ ọkụ, a ga-ehichapụ ájá na-ese n'elu mmiri, nsị mmanụ na sundries n'elu eriri USB ma mee ka ọ dị ọcha, a ga-arụkwa ihe mkpuchi ọkụ na-enwu ọkụ mgbe elu ahụ kpọrọ nkụ.
A ga-agbasa ma kpochaa ihe mkpuchi ọkụ maka eriri, a ga-agwakọta ya na ojiji. Mgbe mkpuchi ahụ dị ntakịrị, ọ nwere ike diluted na mmiri mmiri kwesịrị ekwesị iji kwado spraying.
Achọghị mkpuchi mkpuchi mmiri na mgbochi mmetọ na oge na tupu ewu ya.
Maka wires na eriri nwere skins plastik na roba, ọkpụrụkpụ mkpuchi bụ 0,5-1 mm, ọnụọgụ mkpuchi ahụ dịkwa ihe dịka 1.5 n'arọ / m, maka eriri a gwara mmanụ nke ejiri akwụkwọ mmanụ jupụta, a ga-ebu ụzọ kpuchie akwa oyi akwa. , ma mgbe ahụ a ga-etinye ihe mkpuchi ahụ. Ọ bụrụ na a rụrụ ụlọ ahụ n'èzí ma ọ bụ na gburugburu ebe obibi, a ga-agbakwunye varnish kwekọrọ.
Nkwakọ ngwaahịa na Transportgbọ njem
A ga-etinye mkpuchi mkpuchi eriri USB n'ime batrị ma ọ bụ rọba rọba.
Ekwesịrị ịchekwa mkpuchi mkpuchi ọkụ ọkụ na gburugburu ebe dị jụụ, akọrọ na ikuku.
Mgbe ị na-ebugharị, a ga-echebe ngwaahịa ahụ site na anyanwụ.
Oge nchekwa dị irè nke mkpuchi ọkụ na-ekpuchi ọkụ bụ otu afọ.
Nke gara aga: Na-agbanwe fireproof mkpuchi
Osote: Fireproof ákwà na Silicone Mezie
Weicheng Fire Prevention Technology Group Co., Ltd. bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka kemịkalụ na mmepe na nrụpụta akụrụngwa ọkụ na ọkụ na-egbochi ihe ọkụ ọkụ ...
Weicheng Fire Mgbochi Technology Group Co., Ltd.